Nepal Dayari | हवाई उडान खुलेसँगै भाडापनि परिवर्तन, कहाँको कति बढ्यो हवाई भाडा ? हेर्नु`होस्
हवाई उडान खुलेसँगै भाडापनि परिवर्तन, कहाँको कति बढ्यो हवाई भाडा ? हेर्नु`होस्
असार १६, २०७८ बुधबार ९९० पटक हेरिएको
मुलुकको आन्तरिक हवाई उडान यही असार १७ गतेदेखि सञ्चालन हुने निर्णय भएसँगै आन्तरिक उडानका एयर`लाइन्स जन`स्वास्थ्यको माप`दण्डको परि`पालना गर्दै उडानको तया`रीमा जुटेका छन् ।
आन्तरिक उडानका अग्रणी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर, यती एयरलाइन्स, श्री एयरलाइन्स, सौर्य एयर`लगायत एयरलाइन्सले सङ्क्रमण`रहित उडानका लागि आवश्यक तयारी गरेका हुन् । उपर्युक्त एयरलाइन्सले यसअघिको को भिड–१९ महा|मारीको पहिलो लहरपछिको उडानमा अपनाइएको स्वास्थ्य प्रोटोकललाई पूर्ण रुपमा पालना गर्दै उडान सञ्चालन गरिने जनाएका छन् ।
एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षा र जनस्वास्थ्यको माप`दण्डलाई प्रभावकारी रुपमा पालना गरी उडान सञ्चालन गर्नेगरी टिकट बुकिङ पनि शुरु गरिसकेका छन् । बुद्ध एयरले आइतबारदेखि औपचारिक रुपमा कार्यालय सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण अनौपचारिक रुपमा सीमित सङ्ख्याका कर्मचारीमार्फत सेवा सञ्चालन गरिरहेका एयर|लाइन्सले उडान खुल्ने भएपछि कार्यालय सञ्चालन तथा यात्रुको सहजताका लागि बुकिङ पनि शुरु गरिएको जनाएका छन् ।
अघिल्लो महामारी`पछिको उडानमा हवाई भाडामा भारी छुटका साथ उडान गरेका एयरलाइन्सले पछिल्लो उडानमा हवाई भाडा केही मात्रामा बढ्न|सक्ने जनाएका छन् । नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि गरेकाले साबिकको हवाई भाडा|दर केही वृद्धि हुने बुद्ध एयरले जनाएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जन|स्वास्थ्यको माप`दण्डको पूर्ण पालना हुने गरी अर्को आदेश जारी नभएसम्मका लागि असार १७ देखि कूल उडान सङ्ख्या|को ५० प्रतिशत नबढ्ने गरी आन्तरिक उडान सञ्चा`लन गर्न नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय`बमोजिम क्यानले एयर|लाइन्सलाई उडान कोटा निर्धारण गरेको छ ।
अहिलेको अवस्थामा बुद्ध एयरले जम्मा ३१ उडान गर्नेछ । कम्पनीले काठमाडौँ`देखि विराट`नगर गन्तव्यमा दैनिक चार, भद्रपुर तीन, तुम्लिङटार एक, जनकपुर तीन, पोखरा तीन, भैरहवा पाँच, धन`गढी दुई र सुर्खेत एक उडान गर्ने तालिका बनाएको छ ।
यस्तै यती एयर`लाइन्सले कूल १५ उडान गर्नेछ । यतीले विराटनगर तीन, भद्रपुर दुई, जनकपुर दुई, सिमरा दुई र पोखरा दुई उडान तालिका बनाएको छ । श्री एयर`लाइन्सले सात, सौर्य एयर`लाइन्सका तीन उडान तालिका छन् ।
महा`मारी नियन्त्रण गर्न सरकारले गत वैशाख २० गतेदेखि आन्तरिक तथा वैशाख २३ गतेदेखि अन्तर`राष्ट्रिय उडान स्थगन गरेको थियो । कोभिडका सङ्क्रमित बढे`सँगै सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न जिल्लामा निषे`धाज्ञा जारी गरेको थियो । –ताजा खबर बाट